» टिप्पणी : समस्याको हल कहिले हुन्छ मुख्यमन्त्री ज्यू ?
टिप्पणी : समस्याको हल कहिले हुन्छ मुख्यमन्त्री ज्यू ?
२०७५ श्रावण ३०,बुधबार १९:१८
हेटौँडा उपमहानगरपालिका ४ मा रहेको ओम्याक्स सिनेमा हलमा अन्दाजी बुधबार बिहान १० बजे लागेको आगो लामो समय पछि नियन्त्रणमा आएको थियो । आगलागीको कारण हलमा पूर्ण रुपमा क्षति भएको थियो। हलभित्र रहेका सामानहरु जलेर क्षति भएका छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको वारुणयन्त्रले आगो निभाउन नसकेपछि नेपाल आयल निगम अमलेखगन्जको वारुणयन्त्र मगाएर नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी, ससस्त्र प्रहरी र स्थानिय मिलेर नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी उपरिक्षक बुद्धीराज गुरुङले बताउनुभयो । ओम चलचित्र हल २०४४ सालमा स्थापना भएको थियो ।
हेटौंडाको पहिलो अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हल वि.स.२०६९ जेठ बाट सञ्चालनमा आएको ओम्याक्स हल आगलागी हुँदा क्षण भरमै ध्वस्त भएको छ । हलमा एक साथ ४ सय ३१ जनाले फिल्म हेर्न सक्थे । ओम्याक्स हल बिद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको प्रहरीले बताएको थियो ।
क्युएफएक्स ब्राण्डेड प्रविधि र डिजाइन रहेको थियो। हलमा कम्प्युटरबाट टिकट सिस्टम, इन्टरनेटबाट टिकट बुकिङ गर्ने लगायतका सुविधा थिए । सिनेमा हलले १५ जनालाई रोजगार दिएको थियो तर मकवानपुरले आफ्नो गौरव गुमाएको छ। हेटौंडा ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी हो।मकवानपुर अौधोगिक क्षेत्र र व्यापारको केन्द्र बिन्दु भएको जिल्ला हो।यहाँ सुविधा सम्पन्न दमकल र एम्बुलेन्स नै छैन।बिरामी लैजान एम्बुलेन्स २/३ घण्टा कुर्नु पर्छ त्यो पनि थोत्रो पुरानो आउछ।
समस्याको हल कहिले हुन्छ मुख्यमन्त्री ज्यू?
एम्बुलेन्सले भरतपुर सम्म लैजान थुप्रो भाडा भन्ने गरिन्छ।कतिपय बिरामी भाडा तिर्न नसकि लोकल गाडीमा लैजाने गरेको भेटिन्छ।एम्बुलेन्स भाडामा पनि बार्गेनिङ गरिरहेको कहिलेकाही भेटिरहेको हुन्छु।जताबाट आउदा जादा पनि बिरामी नलिईकन एम्बुलेन्स नआउने बिरामीले गुनासो गरिरहेको भेटेको छु। उपमहानगरपालिका हेटौंडा बजारमा घना बस्ति र उद्योगहरु बढ्दो छ।एउटा मात्र दमकल छ।आगलागी भएको बेलामा एउटा मात्र दमकलले हम्मेहम्मे हुन्छ कहिले आगलागी नियन्त्रण गर्न नसकेको पनि छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका वारुण यन्त्र शाखा प्रमुख बालकृष्ण बास्कोटाले भन्नुभयो “वारुणयन्त्र शाखामा हाल दुईतल्लामा चढ्न सक्ने भर्याङ, दुई थान ज्याकेट, बुट र हेल्मेट, तेलमा आगो लाग्दा निभाउन प्रयोग गरिने फोम बाहेक अन्य उपकरण छैनन् । कर्मचारीलाई समेत पर्याप्त तालिम नदिएको उनी बताउँछन् ।
वि.सं. २०५१ सालमा केही कर्मचारीलाई तालिम दिइएको भए पनि त्यसयता कुनै तालिम भएको छैन ।” वि.स.२०४७ सालमा ल्याइएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले संचालन गरिरहेको वारुणयन्त्र २८ बर्ष पुरानो छ।उपमहानगरपालिकामा कहिले हुन्छ नयाँ दमकलहरु मुख्यमन्त्री ज्यू ? हेटौंडामा सानो र थोरै पानी अट्ने दमकल फेरि त्यो पनि दुई तल्लाभन्दा माथिको घरमा चढ्ने भर्याङको अभावले दमकलले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । हलको आगो निभाउनका नसक्दा चितवन, बिरगज्न र आयल निगमको दमकल मगाइएको थियो के सधैं मागेर चलाउने हो त? कहाँ कतिखेर आगलागी हुन्छ थाहा हुदैन दमकलको जोहो गर्नु पर्दैन मेयर ज्यू ?
हेटौँडामा प्रयोग हुदै आएको दमकलमा ८/९ जना कर्मचारीहरु छन् त्यो पनि कोही बिदामा,कोही बिरामी र कोही अफिस व्यवस्थापनामा खटिँदा आगलागी भएको स्थानमा २ देखि ५ जना कर्मचारी मात्र खटिन पुग्छन्। यस्ता घटिया व्यवस्थापनले गर्दा नै सामान्य आगो लागीबाट पनि बिस्तारै सबै क्षति हुन्छन्।
हेटौंडामा दमकल आउँछ भनेर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भईरहेको छ। जनताले हेर्दाहेर्दै ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ। हेटौंडामा केके आवश्यक छ मेयर र मुख्यमन्त्रीलाई सधैं भनिरहनु पर्छ र?
नदीमा फोहोर फाल्नेलाई २३ हजार रुपैयाँ जरिवाना
सोमबार कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक विदा
कृषिमा हेटौँडा उपमहानगरको योजना– खुवा बनाउने विद्युतीय मेसिनदेखि अनुदान वितरण गर्नेसम्म